Ciidamada Mareykanka oo billaabay in ay isaga baxaan wadanka Afghanistan [Warbixin].
Tuesday March 10, 2020 - 17:29:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradda difaaca dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in uu bilaawday ka bixitaanka ciidamada Americanka wadanka Afghanistan iyadoo lafulinayo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan ka dhacay wadanka Qadar.
Colonel Sony Legate oo u hadlay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in gelinkii hore ee maalintii Isniinta uu bilaawday ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan islamarkaana la qorsheeyay in toban maalmood gudahood wadankaas looga saaro kunanaan askari.
Saraakiisha Americanka waxay sheegayaan in ciidamada bixitaanka bilaabay lagu daad gureeyay diyaarado iyagoo hubkooda wata balse bixitaanka ugu weyn ayaa loo adeegsan doonaa dekad kutaal magaalada Karaaji ee wadanka Pakistan halkaas oo ay kusoo xiranayaan Maraakiib dagaal.
Qodobadii ay Taliban iyo Mareykanka ku heshiiyeen waxaa kamid ahaa in bixitaanka ciidanka Mareykanka uu bilaawdo 10 maalmood gudahood islamarkaana Afghanistan looga saaro ciidan dhan 8600 oo askari 135 maalmood gudahood.
Mark Esper oo ah wasiirka difaaca Mareykanka ayaa xaqiijiyay in uu amar kusiiyay Jeneraal Scott Miller oo ah taliyaha ciidanka USA ee Afghanistan in uu dedejiyo qorshaha bixitaanka, dhinaca kale Taliban ayaa sii wadda weerarada ay ku beegsanayso ciidamada xukuumadda dabadhilifka Kabul.
Weeraro dhiigbadan ku daatay oo ay fuliyeen dagaalyahannada Taliban ayaa lagasoo calaamadeeyay gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha wadanka Afghanistan.
Sababta ay dagaalladu wali usii socdaan xilli xabad joojin la iclaamiyay ayaa lagu sheegay xukuumadda Kabuul oo aan qeyb ka aheyn wadahadalkii Taliban waxaana muuqata in Imaarada Islaamiga ah ay dhul ballaaran sii qabanayso ayna suurtagal tahay in ay wadanka lawareegto marka ay ciidamada Americanka ah Afghanistan ka dhammaadaan
Fadlan Like Saar Page-ka SomaliMeMo ee Facebook.
Rabashadihii ka bilaawday Minneapolis oo ku fiday 30 katirsan magaalooyinka Mareykanka.